စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လှည့်စားမှုအားလုံးကို ဆန့်ကျင် (ယန်ကျွံ့) – zlkontempo
Posted on December 5, 2011 | by zlkontempo
မနေ့က သင်ဟာ ကျောင်းတော်ကြီးဆင်းပညာရှင် ၊ ဒီနေ့သင်ဟာ လူဆိုးဂိုဏ်းဝင် ၊ မနက်ဖန်သင်ဟာ အိပ်နေရင်း စကားတွေ ပြောဆိုနေပြီး ဖီလော်ဆော်ဖါ တစ်ယောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ဘ၀ဆိုတာဒါပဲလား ။ ဆဲလ်ဖုံးတွေဝင်လာလို့မရပေမယ့် လေယာဉ် ပျံတွေဟာ လူတွေကြား ဟိုဒီသွားလာလို့ရတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်သလား ၊ ကြွပ်ဆတ်တဲ့ ကောင်းကင်တွေကို ကုတ်ခြစ်လို့။ အပြင် ထွက် ၊ နွားသိုးနဲ့အတူ ၊ မိစ္ဆာတို့ရဲ့မင်းသား ၊ အဲဒီနတ်ကိုသွားကြည့်ချေ –– တစ်နှစ်ဆိုလုံလောက်ပါတယ် ၊ တိတ်ဆိတ်နေတတ်ဖို့ ၊ လေ့လာသင်ယူဖို့ ၊ သံနဲ့ ရွှံ့စေး ဂူတွေထဲသွားနေထိုင်ချေ ၊ ပြီးရင် ရှိုက်ငို ။ ဆောင်းရာသီကုန်တော့မယ် ၊ သင့်အမှတ်ရမှုတွေကို သင်ယုံကြည်ရလိမ့်မယ်။
လိင်ဆက်ဆံရေးဟာ ၉၆ ပါးရောဂါကိုပျောက်ကင်းစေတယ်။
ကြော်ငြာကိုဆန့်ကျင်တယ် ၊ မေ့ပျောက်မှုကို ဆန့်ကျင်တယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ မှတ်ပုံတင်နဲ့ ရုပ်ဆိုးဆိုးမျက်ခွက်ကို ဆွဲဖြဲတာ ဆန့်ကျင်တယ်။ ရွှေရောင်ဝတ်စုံဝတ်ပြီး ဥက္ကာပျံတွေကြား ပျံသန်းလာခဲ့ပေမယ့် သမီးအရင်းရဲ့ နာမည်မေ့တာကို ဆန့်ကျင်တယ်။ အသားစားသတ္တ၀ါတွေရဲ့ အကကို ဆန့်ကျင်တယ်။ ကွန်ပြူတာတွေ သေဇောငင်နေကြတာကို ဆန့်ကျင်တယ်။ တံစဉ်တစ်လက်လို နေနေရတာကို ဆန့်ကျင်တယ်။ ညရနံ့ဟာ ညမှာပဲ ပျောက်ကွယ်သွားတာကို ဆန့်ကျင်တယ်။ ဖက်ရှင်ဆန်တဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေ ဒေါ့ကွမ်းတွေကို ဆန့်ကျင်တယ်။ စိတ်ကူးယဉ်တာတွေ ၊ ဖေါက်ထွင်းမြင် အ၀တ်အစားတွေ ၊ ဘဲငန်းမွေးတွေလို ပေါက်ကွဲတဲ့ နှလုံးသားကို ဆန့်ကျင်တယ် . . . ခြေလှမ်း ၁၀ လှမ်းအကွာမှာ အရက်ကြောင့် သေရတော့မယ့် ယောက်ျား . . . ကမ္ဘာကြီးကို စိုးမိုးနေကြတဲ့ နလပိန်းတုန်း ယောနိတွေ . . . စာမေးပွဲမေးခွန်းစာရွက်တွေလို အပြာမဂ္ဂဇင်းတွေ . . . ကြောက်ရွံ့မှုကို ဆန့်ကျင်တယ်။
ပိုပြင်းထန်တဲ့ အင်အားနဲ့ ဒေါသနဲ့ မုန်တိုင်းထန်စေ။
ချိကုန်းသခင်တွေကို ဆန့်ကျင် ၊ ရော့ခ်အဆိုတော်တွေကို ဆန့်ကျင် ၊ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ လှပတဲ့ လေထုကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်ကို ဆန့်ကျင် ။ လေလွင့်ဝိဥာဉ်တွေသွားကြတဲ့ အရက်ဆိုင်တွေကို ပိတ်ပင်တာကို ဆန့်ကျင်။ ရှေ့မှာ ချိုးကွေ့သွားတဲ့နတ်ကို ဆန့်ကျင်။ ရင်သားကိုးကွယ်မှုကို ဆန့်ကျင်။ ပန်းရောင်းတာကို ဆန့်ကျင် ၊ အထက်မှာ ကြယ်ခွန်နှစ်လုံးသွားလာနေပြီး လူသေဘုံက ပန်းတွေ ရောင်းစားပစ်တာကို ဆန့်ကျင် ၊ ဗာလင်တိုင်းနေ့နဲ့ မိခင်များနေ့အတွက် ပန်းတွေကို ဆန့်ကျင် ၊ ပန်းတွေကိုက်စားတာကို ဆန့်ကျင် ။ အရေပြားကို ဆန့်ကျင်။ မိုးပြာရောင် နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုတွေကို ဆန့်ကျင်။
ပန်းချီဆရာရဲ့ လက်တွေထဲက မြက်ခင်းပြင်တွေလွှတ်ပေးလော့။
ဦးဏှောက်ကိုဆွနေတဲ့ သွေးတိုးဆီက သံသယတွေပေါ်လာတယ် ၊ ဒါပေမယ့် ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုဆီက ဘုရားဝတ်ပြုမှုဟာ တကယ်လာနိုင်မလား ၊ အဲဒါကြောင့် ၊ ဓါးခုတ်ကောင်ရဲ့ မိန့်ခွန်းကို ဆန့်ကျင် ၊ မိုက်ဆိုဖိုးဘစ်က် သိပ္ပံပညာရှင်ကို ဆန့်ကျင် – ငါ့ကို သူမ နာကျင်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ လူဆိုးဂိုဏ်းဝင် လူမိုက်တွေအဖြစ် ဟန်ဆောင်ကြတဲ့ ပညာတတ်တွေကိုလည်း ဆန့်ကျင်။ ထိုနည်းတူ ၊ နိုင်ငံခြားငှက်တွေလာနေဖို့ သစ်သားအိမ်တွေအဖြစ် ဟန်ဆောင်နေကြတဲ့ တောအုပ်တွေကိုလည်း ဆန့်ကျင် ၊ နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ အနုပညာတွေရောင်းစားနေကြတဲ့ လမ်းဘေးကျွမ်းဘားအားကစားသမားတွေရဲ့ သယ်ဆောင် သွားခြင်း ခံရလိမ့်မယ် ၊ သီချင်းထဲမှာ အကျဉ်းကျ ၊ မီးစွဲလောင် ၊ အနုပညာတောင်ကြားတွေထဲ ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ အိပ်မက်လို . . . . ထာဝရ . . . .
ကွန်ပြူတာရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကို လွတ်လပ်စေလော့။
လှည့်ပတ်မြည်နေတဲ့ အသံဟာ ညဆိုင်းအလုပ်သမားတွေကို နှိုးလို့ရတယ်လို့ ပြောသံကြားတယ် ၊ စီးကျလာတဲ့ သွေးဟာ ၅၀ ခုနှစ်တွေမှာ မွေးဖွားလာသူ လူမည်းတွေကို ရိုက်နှက်လို့ရတယ်။ ဘာရယ်မဟုတ် သင်ရေးဆွဲလိုက်တဲ့ လေပုံတွေနဲ့ သစ်သား ကွင်းထိုးဖိနပ်ပုံတွေက နေ့လည်ခင်းကို တာရှည်စေတယ် ၊ ဆင်ခြေလျှောကနေဆင်းလာတဲ့ သူခိုးဟာ ဆည်းဆာကို ငေးငိုင် ကြည့်နေတဲ့အထိ။ ကောင်းကင်မှာ အစည်းအဝေးတွေ ကျင်းပနေတဲ့ ငနဲတွေ ၊ သူတို့ကခုန်ကြပြီး ဒလိမ့်ကောက်ကွေးလိမ့်ကျ သွားလိမ့်မယ်။ လူတွေဟာလည်း စုဝေးလာနေကြပြီ ။ လစ်စို့။
Punk သီအိုရီဆိုတာ မရှိဘူး ၊ punk အက်ရှင်ပဲရှိတယ်။
အကယ်၍ သေရင် ငါ့ကိုမြှုပ်လိုက်ပါ။
အချစ်ရဲ့ အမတနဲ့ အခြားနေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းတွေကို ယုံကြည်ပါ။
ဖျော်ဖြေရေးဂျာနယ်လစ်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ရွဲ့နေတဲ့ အပြုံးတွေကို ဆန့်ကျင်။
ဆူညံသံဟာ သင့်ဘ၀ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်တယ် ၊ မီးခိုးတွေအူနေတဲ့ စာကြည့်ခန်းထဲမှာတော့ မတီးမှုတ်ပါနဲ့ –– အဲသလို သူပြောတယ် ၊ ခေါင်းပေါ်မှာ တိမ်မည်းကြီးတွေ ပြွတ်သိပ်မိုးလို့ ၊ သိပ္ပံပညာဟာ အယူသီးမှုပါပဲ။ ပြီးတော့ပြောတယ် ၊ ဒေါသ ထွက်နေတုံး ဆေးလိပ်သောက်ရင် ခေါင်းကိုက်တတ်တယ် ၊ သွားရည်စာတွေဟာ ဟစ်ပီတွေကို လေးလေးနက်နက် စဉ်းစား စေတယ် ၊ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ သံနဲ့လုပ်ထားတဲ့ လက်ပါးစေကို မီးခိုးက ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တယ်။ လူ့ဘ၀နဲ့ပတ်သက်လို့ ၊ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပြည့်ဝတဲ့ ဘ၀ ၊ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပြည့်စုံပြည့်ဝတဲ့ဘ၀ . . . . သူ့နယ်ပယ်ဟာ သန့်ရှင်းစင်ကြယ် တယ် ၊ အိမ်နီးနားချင်းတွေဟာ နေ့တိုင်းအူကြတယ် ၊ သူပြောတယ် ၊ အထက်အရပ်မှာ ဘာကယ်တင်ရှင်မှမရှိဘူး။
လိင်တူချစ် –– အဲတော့ဘာဖြစ်လဲ။
ရဲဘော်လီပိုက်ဆီက သင်ယူလော့ ––
ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလိုက် ၊မိမိတို့ကို မိမိတို့ပြောင်းလိုက်။
အဝေးကနွားတွေ ၊ သူတို့ရဲ့ စိုက်ကြည့်နေကြတဲ့ မျက်လုံးတွေ ၊
ဦးဏှောက်ဆိုင်ရာ ကျွန်ပြုမှုကို ဖျက်သိမ်းလော့။
ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူဟာ ပိုက်ဆံထည့်ဖို့ အိတ်တစ်လုံးလိုတယ်။
နွေဦးရဲ့ အချက်အလက်မှန်သမျှဟာ ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ တူလိုက်တာ။
သစ်ပင်တွေကြားထဲ ၊ ရုန်းကန်မှုကို ငုံ့ကြည့်နေတဲ့ ငှက်တစ်ကောင်လို။
သစ်ပင်တွေကြားထဲ၊ မြေခွေးလို ဥာဏ်များတဲ့ မိန်းမတွေကို ကြိုဆို။
သစ်ပင်တွေကြားထဲ၊ အမေရိကကို ဖျက်သိမ်းလိုက်။
ပျံသန်းနိုင်တဲ့ ဘယ်သူမဆိုဟာ မှော်ဆရာပဲ။
ဆန့်ကျင် ။ အားလုံးကို ဆန့်ကျင်။
ငါ့တို့ကို ငါတို့ ဆန့်ကျင်။ ငါတို့ဆန့်ကျင်တာ အားလုံးကို ဆန့်ကျင်။
ငါတို့ မဆန့်ကျင်တာ အားလုံးကို ဆန့်ကျင်။
ငါတို့နဲ့ ပတ်သက်သမျှအားလုံးကို ဆန့်ကျင်။
ငါတို့မဆန့်ကျင်ရတာ မှန်သမျှနဲ့ ဆန့်ကျင်လို့မရတာ မှန်သမျှကို ဆန့်ကျင်။
5 – Dec – 2000
(တရုတ်ခေတ်ပြိုင်ကဗျာဆရာ Yan Jun ရဲ့ Against All Organized Deception ကို မြန်မာဘာသာပြန်တာဖြစ်ပါတယ်)
5 – Dec – 2011